Saddex nin oo loo heysto dilka oday ganacsi ku lahaa Xamarweyne oo lasoo bandhigay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho kusoo bandhigtay 3 nin oo ku eedeysan dilka ganacsade meydkiisa 21-kii bishaan laga dhex helay bakhaar uu ku lahaa degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho.
Ragaan saddexda ah waxaa lo heystaa iney dileen Aadan Xuseen Abaadir, kasoo ehelkiisu waayeen 19-kii bishaan Janaayo, hase ahaate meydkiisa oo ku hoos jira jawaano 21-kii bisha laga dhex helay goob ganacsi oo uu ku lahaa Xamarweyne.
Ragaan ayaa odayga dilay kadib markii ay ugu dhex galeen dukaan ganacsi oo uu ku lahaa degmadaasi, iyagoo doonaayay inay dhac u geystaan.
Waxay sheegeen in sababta ay u weerareen dukaankaasi ay ahayd, iyagoo ku tuhmaayay jawaan lacag ah, laakiin markii ay odayga dileen ay ka helayn hal milyan oo shilin Soomaali ah, oo u dhiganta kontor dollar ($50US).
Guddoomiyaha Maxkamada Gobolka Banaadir, Xaashi Cilmi Nuur oo Saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ciidamada booliiska Xamarweyne ay gacanta kusoo dhigeen ragaas oo kiiskooda maxkamada Gobolka loo soo gudbiyay.
Wuxuu sheegay in loo gudbiyay Xabsiga dhexe ee Xamar, dhawaana kiiskooda la de-dejinaayo oo mxakamadda lasoo joojin doono.
“Kiiskaan waa laga dabategay, ragaan marxuumkaas markii ay dileen waxey hoos heliyeen jawaano, kuma fakerin in la arki doono, marka maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa” ayuu yiri gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, Xaashi Cilmi.